Fetin’ny ray : hanolotra seho mangotraka i Big MJ | NewsMada
Fetin’ny ray : hanolotra seho mangotraka i Big MJ
Par Taratra sur 14/06/2018
Nisy ny fanomezana ho an’ny reny fa tsy ho latsa-danja ihany koa ny ho azon’ny ray. Iray amin’ny hanatanteraka izany i Big MJ sy ny talentany.
Hiavaka ny seho! I Big MJ, fanta-daza, kalazalahy amin’ny filalaovana mozika mafana. Hanamarika ny “ Fetin’ny ray” ao anatin’ny seho mangotraka nampitondraina ny lohateny “Bal mafana”, ity mpanakanto manana ny maha izy azy ity. Izy no hampitsinjaka, etsy amin’ny “Les Rochers” Ambohimangakely, ny alin’ny zoma 15 jona ho avy izao. Hangotraka ny alim-pikoranana, hivadika ho alim-pandihizana mangotraka izanyy avy eo.
Tsy voafetra ho an’ireo dada na ray ihany anefa ny fotoana iarahana amin’ity mpanjakan’ny mozika mafana ity fa tsy ho diso anjara ihany koa ny vehivavy. Hahazo ny anjarany ihany koa izy ireo. “Na ririnina aza ny andro, tsy ho heno akory izany hatsiaka izany satria hafana araka ny anarany ity fanamarihana ny “Fetin’ny ray” ity. Hifameno rahateo ny hafanana”, hoy hatrany ny mpikarakara.
Marihina fa tsy ny sehatra eto an-toerana ihany fa hatrany ivelany mihitsy no efa mahalala tsara ny fahaizan’i Big MJ manafana lanonana tahaka itony. Miainga eo amin’ny fanentanana, mandalo eo amin’ny hira, mipaka hatrany amin’ny dihy, samy mafana avokoa raha vao miakatra sehatra ity mpanakanto ity.
Nanangona: HaRy Razafindrakoto